China 310s သံမဏိပြားသံမဏိပြားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း Huaxiao
တရုတ်သံမဏိစွမ်းရည် အကြောင်း 310s ပူ ရှင်းပြီသံမဏိ ပန်းကန်, 310s HRP, PMP
အကျယ် ၆၀၀ မီလီမီတာ - ၃၃၀၀ မီလီမီတာ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောထုတ်ကုန်များကချွတ်ထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးသည်
အလေးချိန်ခွက်: 1.0MT - 10MT
310 / 310s ကွဲပြားခြားနားသောစံကနေတူညီတဲ့တန်း
1.4841 S31000 SUS310S 1.4845 S31008 S31008S 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိ
S31008 ဓာတုပစ္စည်း ASTM A240:
ဂ: ≤ 0,08, Si: ≤1.5 Mn: ≤ 2.0, Cr: 16.00～18.00, နီ: 10,0～၁၄.၀၀၊ .030.03, P: .00.045 Mo: 2.0-3.0, N≤0.1
S31008 စက်မှုပိုင်ဆိုင်မှု ASTM A240:
၁။ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုသည် ၃၁၀ ဖြစ်သည်။ ကာဗွန်ပါဝင်မှုသည် ၀.၁၅% နှင့် 310S လိုအပ်ချက်သည် ၀.၈၈ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည် ၀.၇၅% နှင့်ညီမျှသော MO အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းလိုအပ်သည်။
2. ခိုင်မာမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌မျက်နှာပြင်မာကျောမှု။ 310 310S ထက်သာ။ ကြီးမြတ်သည်
310S MO ကိုဖြည့်သောကြောင့် 3. ချေးခုခံ 310S 310 ထက်သာ။ ကြီးမြတ်သည်
4. တူညီသောအပြောင်းအလဲနဲ့အခြေအနေများ၏မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည် 310S 310 ထက်ပိုကောင်းတယ်
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရသံမဏိသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် billets များသည်ပုံမှန်အပူချိန်တွင်ပုံပျက်ရန်ခက်ခဲပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုလှိမ့်ရန်အပူချိန် ၁၁၀၀ မှ ၁၂၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူပေးသည်။ ဤရွေ့ကားလှိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပူကျဆင်းမှုဟုခေါ်သည်။ သံမဏိအများစုကိုပူသောကြောင့်လှိမ့်ထားသည်။ သို့သော်သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်သံအောက်ဆိုဒ်အတိုင်းအတာထိရောက်နိုင်သောကြောင့်သံမဏိ၏မျက်နှာပြင်မှာကြမ်းတမ်းပြီးအရွယ်အစားမှာများစွာပြောင်းလဲနေသည်။ ထို့ကြောင့်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်၊ တိကျသောအရွယ်အစားနှင့်ကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသောသံမဏိလိုအပ်သည်။ ပူပြင်းစွာလှိမ့်သော Semi-lested ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်အချောထုတ်ကုန်များကိုကုန်ကြမ်းများအဖြစ်အအေးခံသည်။ Rolling နည်းလမ်းထုတ်လုပ်မှု။
သာမန်အပူချိန်တွင်လှိမ့်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အအေးခံခြင်းဖြစ်သည်။ metallographic ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အအေးမိခြင်းနှင့်အပူကူးခြင်းတို့၏ကန့်သတ်ချက်ကို recrystallization temperature ဖြင့်ခွဲခြားထားသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ recrystallization အပူချိန်ထက်အောက်သို့လှိမ့်ခြင်းသည်အအေးမိခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိသည် recrystallization အပူချိန် ၄၅၀ မှ ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသည်။
ပူပြင်းစွာလှိမ့်သည်အမည်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမြင့်မားသောအတုံး၏အပူချိန်ရှိသဖြင့်ပုံပျက်သောခုခံနိုင်မှုသည်သေးငယ်ပြီးပမာဏများစွာရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာသံမဏိပြား၏လှိမ့်မှုကိုဥပမာအနေနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သွန်းလောင်းသည့်အထူ၏အထူမှာယေဘုယျအားဖြင့် ၂၃၀ မီလီမီတာဖြစ်ပြီးကြမ်းတမ်းသောလှိမ့်မှုနှင့်အပြီးသတ်လှိမ့်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးအထူသည် ၁ မှ ၂၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သံမဏိပြား၏အကျယ်နှင့်အထူအချိုးအစားကြောင့်ရှုထောင့်ဆိုင်ရာတိကျမှုလိုအပ်ချက်မှာအလွန်နည်းပါးပြီးပုံသဏ္problemာန်ပြproblemနာပေါ်ပေါက်လာရန်မလွယ်ကူပါ၊ အဖွဲ့အစည်း၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုအလှည့်ကျထိန်းချုပ်ထားသောအအေးနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အအေးများဖြင့်ရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလှိမ့်မှု၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းချုပ်ရန်လှိမ့်သောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်သည်၊
အအေးခံခြင်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့်လှိမ့်မီအပူပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ သို့သော်အထူ၏သေးငယ်သောအထူကြောင့်ပန်းကန်ပုံသဏ္occurာန်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်အအေးလှိမ့်ပြီးနောက်၎င်းသည်အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သဖြင့်ချွတ်ခြင်း၏အရွယ်အစားတိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကိုအသုံးပြုသည်။ အအေးလှန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ရှည်လျားပြီး၊ ပစ္စည်းကိရိယာမြောက်မြားစွာရှိပြီးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှုပ်ထွေးသည်။ အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်သောအရွယ်အစားတိကျမှု၊ ပုံသဏ္qualityာန်နှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်နှင့်အမျှထိန်းချုပ်မှုပုံစံ၊ L1 နှင့် L2 စနစ်များနှင့်အအေးကြိတ်စက်၏ပုံသဏ္controlာန်ထိန်းချုပ်နည်းများမှာအတော်အတန်ပူသည်။ ထို့အပြင်အလိပ်နှင့်ချွတ်၏အပူချိန်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောထိန်းချုပ်မှုညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အအေးလှိမ့်ထုတ်ကုန်နှင့်ပူပြင်းသောထုတ်ကုန်စာရွက်သည်ယခင်ဖြစ်စဉ်နှင့်နောက်ဖြစ်စဉ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ပူသောအလိပ်ထုတ်ကုန်သည်အအေးလှိမ့်ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပြီးအအေးလှိမ့်သောသံမဏိကွိုင်ကိုချဉ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်စက်ပြုလုပ်သည်။ လှိမ့်စက်များကိုလှိမ့်သည်အအေးခံသည်။ အဓိကအားဖြင့်ထူထဲသောအလိပ်လိပ်များကိုပါးလွှာသောအအေး - အလိပ်လိပ်များထဲသို့လှိမ့်သည်။ အအေးလှိမ့်ပုံး
ရှေ့သို့ 309 ပူရှင်းပြီသံမဏိပြား
နောက်တစ်ခု: 316L 316 သံမဏိပြားများကိုအပူတွန်းခြင်း